भावपूर्ण पत्रकार सम्मेलनमार्फत हङ्कङकी प्रमुख ल्यामले भनिन् ‘शहरलाई खाडलतिर नधकेल’, प्रदर्शन अझै जारी « Lokpath
२८ श्रावण २०७६, मंगलवार १५:२१
भावपूर्ण पत्रकार सम्मेलनमार्फत हङ्कङकी प्रमुख ल्यामले भनिन् ‘शहरलाई खाडलतिर नधकेल’, प्रदर्शन अझै जारी
प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०७६, मंगलवार १५:२१
एजेन्सी । कार्यकारी प्रमुख क्यारी ल्यामले जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीलाई हङ्कङ शहरलाई ‘खाडल’तिर नधकल्न चेतावनी दिनुभएको छ । आज (मंगलबार) एक भावपूर्ण पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकार प्रमुख ल्यामले हङ्कङ खतरनाक अवस्थामा पुगेको बताउभयो । जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनले हङ्कङलाई कहिल्यै नफर्किने बाटोतर्फ धकेलिरहेको उहाँको भनाई छ । पत्रकारले प्रश्न गरेपछि सरकार प्रमुख ल्याम प्रदर्शकारीलाई भेट््न जानुभएको थियो । तर, ठुलो आवाजमा उनिहरुले हल्ला गरेपछि उहाँ फर्किनुभएको थियो । प्रदर्शनकारीले सरकार प्रमुख ल्यामको राजिनामा माग गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच, प्रदर्शनकारीहरुले आज पाँचौ दिन पनि विमानस्थलमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् । करिब १० हप्तादेखि जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन राकिने कुनै संकेत नदेखिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।
हङ्कङ सरकारले एक विवादास्पद ‘सुपुर्दगी विधेयक’ ल्याएपछि शुरु भएको प्रदर्शन अहिलेसम्म जारी छ । उक्त विधेयकमा हङ्कङका शंकास्पद अपराधीलाई चीनमा हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारले उक्त विधेयक खारेज गरेपनि प्रदर्शनकारीले भने सत्तासीन नेताहरुले राजिनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
इस्लामाबाद । स्वास्थ्य अवस्था नाजूक रहेका भनिएका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरिफको उपचारका
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर १४ गते हुने स्थानीय तहको उम्मेदवारको नामावली आज प्रकाशन
देशको भूमि जोगाउन सरकार कटिबद्ध हुनुपर्छ : वरिष्ठ नेता पौडेल
इलाम । नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपालको भूमि जोगाउन सरकार कटिबद्ध
स्कुलभित्र गोली चल्यो, दुई विद्यार्थीको मृत्यु
काठमाडौं । संयुक्तराज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यस्थित एक स्कुलका १६ वर्षे छात्रले बिहीबार स्कुलभित्रै
कुन्दन बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको प्रेस सल्लाहकारमा थापाको इन्ट्री
भ्वाइस अफ नेपालबाट बाहिरिइन् रजनी ऋदम राई, छोरीका लागि गाएकी…
होसीयार !अदुवा नखानुस् यी रोग भएकाहरुले (उपयोगी टिप्ससहित
पेटको बोसो घटाउने हो ? दैनिक खानुहोस् यी
सावधान ! ग्यास्ट्रिक भएका व्यक्तिले झुक्किएर पनि खाँदै
आमासहित २ छोरीको विभत्स हत्या प्रकरण : शारीरिक
सुत्नुअघि यसो गर्नुहोस्, तत्काल घट्छ तौल
बामदेवको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना, ओलीले गरे यस्तो प्रस्ताव